စိတ်ကူးပျော်ရာ: ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အကြာကြီး စိတ်မကောက်လေနဲ့
အကြင်နာမဲ့တဲ့ အထင်လွဲမှုတစ်ခုက ပျော်ရွှင်ခြင်းဆီလှမ်းနေတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ခြေလှမ်းကို ပျက်ပြားစေခဲ့တယ်။ ကံကြမ္မာရဲ့အထုံးတစ်ခုကို ဖြည်လိုက်နိုင်ချိန်မှာတော့ အရာအားလုံးဟာ နှောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ လက်ထပ်ပြီး နှစ်နှစ်အကြာ ရွာကမောင့်မေမေကို ကျွန်မတို့နဲ့ အတူလာနေစေခြင်းက ပူဆွေးသောကရဲ့အစပေပဲလား…..
ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေမရှိတော့တဲ့မောင့်ကို အမေတစ်ယောက်တည်းပဲ ပင်ပန်းရုန်းကန်ပြီး ဘွဲ့ရကြီးပြင်းတဲ့အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တာပါ။ ယောက္ခမခေါ်ဖို့ကိစ္စကို ကျွန်မသဘောတူခဲ့ပြီးနောက် မောင့်မေမေအတွက် နေပူစာလည်းလှုံနိုင်အောင်၊ ပန်းတွေလည်းစိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ဝရန်တာပါတဲ့ လက်ယာဖက်အခန်းကို ကျွန်မရှင်းလင်းနေခဲ့တယ်။ နေရောင်ခြည်နဲ့ နွေးထွေးနေတဲ့ အခန်းထဲကို မောင်ဝင်လာပြီး အခန်းရှင်းနေတဲ့ကျွန်မကို ကိုင်မြှောက်ပြီး ပတ်ချာလှည့် ကစားလိုက်တယ်။ အောက်ချပေးဖို့ ကျွန်မတောင်းပန်မှ မောင်က၀မ်းသာစွာနဲ့ “ကဲ…မေမေ့ကို သွားကြိုရအောင်” တဲ့။ မောင့်မေမေရောက်လာဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်။
အရပ်မြင့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထွားတဲ့ မောင့်ရင်ခွင်မှာ ခိုဝင်ရတာကို ကျွန်မကြိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ခံစားမူမျိုးက သေးငယ်တဲ့ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်မရွေး မောင့်အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားနိုင်တဲ့ခံစားမှုမျိုး… ကျွန်မကို လုံခြုံစိတ်တွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။ မောင်နဲ့ ငြင်းခုန်တိုင်း အလျော့မပေးတတ်တဲ့ကျွန်မကို မောင်ကကိုင်မြှောက်ပြီး ကျွန်မ ထိတ်လန့်တဲ့အထိ ခါရမ်းတတ်တယ်။ အဲဒီ ထိတ်လန့်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကလည်း မောင့်အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့သံယောဇဉ်ပေပဲလား။
မြို့ရောက်လာပေမယ့် ရွာကစရိုက်ဓလေ့တွေကို မောင့်မေမေက ချက်ချင်းဖျောက်နိုင်ခဲ့ပုံ မရဘူး။ ပန်းတွေ အမြဲဝယ်ပြီး ဧည့်ခန်းမှာ အလှပန်းအိုး ထိုးတတ်တဲ့ကျွန်မကို ယောက္ခမက ကြည့်မရတဲ့အဆုံး မအောင့်နိုင်ဘဲ…..
“ဘဝကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာ နင်တို့မသိကြဘူးလား..စားလို့ရတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ ပန်းတွေ ဝယ်ခဲ့ရသလဲ…”
“မဟုတ်ဘူးလေ မေမေ…..ပွင့်နေတဲ့ ပန်းကို ကြည့်ပြီး လူတွေရဲ့စိတ်ကလဲ လန်းဆန်းနိုင်တယ်လေ” ကျွန်မရယ်ပြီးပြောတော့ မောင့်မေမေက ခေါင်းငုံ့စူပုပ်နေခဲ့တယ်။
“အမေ ဒါဟာ မြို့သားတွေရဲ့အကျင့် …တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမေကျင့်သား ရလာလိမ့်မယ်” မောင်က ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ဝင်ထောက်တယ်။
ပန်းဝယ်တဲ့ကိစ္စကို ထပ်မပြောတော့ပေမယ့် ကျွန်မပန်းဝယ်ပြန်လာတိုင်း ဘယ်လောက် ပေးဝယ်ခဲ့ရသလဲလို့ မေးတတ်ပြန်တယ်။ ကျွန်မ ပြောပြလိုက်ရင် တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုတ်ထိုးနေတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ အထုတ်ကြီးငယ်တွေနဲ့ ကျွန်မဈေးက ပြန်လာရင် ဟိုဟာ ဘယ်လောက်လဲ…… ဒီဟာ ဘယ်လောက်လဲနဲ့ မေးတတ်ပြန်တယ်။ ဈေးနှုန်းအမှန်တွေကို ကျွန်မပြောပြလိုက်ရင် ယောက္ခမရဲ့စုတ်ထိုးသံက ပိုကျယ်လို့နေခဲ့တယ်။
“ဈေးနှုန်းအမှန်မပြောနဲ့လေ လူအ,မလေးရဲ့” ကျွန်မ နှာခေါင်းကို ဖိညှစ်ရင်း မောင်က ဆိုလာတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တွေက တဖြည်းဖြည်း သံစဉ်တွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ်။
နံနက်စာ မောင်ထပြင်တတ်တာကို မောင့်မေမေက ကြည့်မရဆုံးပါပဲ။ ဘယ့်နှယ် လင်ယောက်ျားက မိန်းမ အတွက် မနက်စာထလုပ်ရတယ်လို့ ….ဒါဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စလို့ သူမြင်ခဲ့တယ်။
မနက်စာစားတိုင်း ပုပ်သိုးနေတဲ့ယောက္ခမရဲ့မျက်နှာကို ကျွန်မ မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို သူကဇွန်းခက်ရင်းတွေ တတောက်တောက်ခေါက်ပြီး အသံတိတ်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ အကနည်းပြ ဆရာမတစ်ဦးပါ။ တစ်နေကုန် ကခုန်ခဲ့ရလို့ ပင်ပန်းနေတဲ့ ကျွန်မအဖို့ မနက်စောစောမှာ နွေးထွေးတဲ့အိပ်ရာကို မခွာရက်ဘဲ ဇိမ်ခံပြီးနှပ်ချင်နေခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်မို့လဲ မောင့်မေမေ အသံတိတ်ဆန္ဒပြတာကို မျက်စိမှိတ်၊ နားပိတ်ပြီး ကျွန်မ မသိချင်ဟန်ဆောင်ခဲ့မိတယ်။
မောင့်မေမေဟာ ကျွန်မကို အိမ်မှုကိစ္စတွေ ကူလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကူရင် ကျွန်မပိုပြီး အလုပ်ရှုပ်ရပါတော့တယ်။ ဥပမာ….ပလပ်စတစ်အိတ်တွေကို ပြန်ရောင်းဖို့ဆိုပြီး အကုန် လိုက်စုထားတတ်တယ်။ နောက်တော့ အိမ်တစ်ခုလုံး အိတ်တွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့တယ်။ ပန်းကန်ဆေးရည်ကို နှာမြောလို့ဆိုပြီး မသုံးဘဲနေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ မစင်တဲ့ပန်းကန်တွေကို သူ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ကျွန်မ ပြန်ဆေးခဲ့ရတယ်။
ညတစ်ညမှာ ပန်းကန်တွေကို ပြန်ခိုးဆေးနေတဲ့ ကျွန်မကို မောင့်မေမေ မြင်သွားခဲ့တယ်။ အိပ်ခန်းတံခါးကို “ဒုန်း”ခနဲ ဆောင့်ပိတ်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာ သူအော်ငိုပါတော့တယ်။ အမေနဲ့မိန်းမကြား မောင်ပျာများရပါတော့တယ်။ အဲဒီညက ကျွန်မကို မောင်စကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုပဲစ,စ ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ “ကျွန်မ ဘာများ အမှားလုပ်ခဲ့မိလို့လဲ..?” လို့ ပြန်မေးတော့ မောင်က ကျွန်မကို ခပ်စူးစူးကြည့်ရင်း…. “မပြောင်တဲ့ ပန်းကန်နဲ့စားလဲ သေမသွားတတ်ဘူး….မင်းဘာလို့ မသိတတ်ရတာလဲကွာ” တဲ့။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ မောင့်မေမေ ကျွန်မကို စကားမပြောတော့ပါဘူး။ နွေးထွေးတဲ့အိမ်က တဖြည်းဖြည်း အေးစက်လာခဲ့တော့တယ်။
မနက်စာထလုပ်တတ်တဲ့မောင်ကို မကြည့်ရက်လို့ မောင့်မေမေက မနက်စာ ချက်ပြုတ်တဲ့တာဝန်ကို ယူလိုက်တယ်။ သားစားနေတာကို ကြည့်ပြီး မောင့်မေမေ ပီတိဖြာပါတယ်။ ကျွန်မကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်ကတော့ အိမ်ထောင့်တာဝန်မကျေဘူးဆိုတဲ့ အပြစ်တင် အကြည့်မျိုးနဲ့ပါ။ အဲဒီအကြည့်ကိုရှောင်ချင်လို့ ကျွန်မရဲ့မနက်စာကို လမ်းမှာဝယ်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ရတာများတယ်။
ညအိပ်ချိန်မှာ မောင်က စိတ်ဆိုးတဲ့လေသံနဲ့ “လူဒီ..အမေလုပ်တဲ့အစာတွေကို ညစ်ပတ်တယ်ထင်ပြီး အိမ်မှာ မစားတာလား” ပြောပြီး တစ်ဖက်ကို မောင်လှည့်လိုက်တယ်။ မောင့်ရဲ့ အေးစက်တဲ့ ကျောပြင်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ မျက်ရည်ကျခဲ့မိတယ်။ “လူဒီ…မောင့်မျက်နှာကိုထောက်ပြီး အိမ်မှာ မနက်စာစားပါလား” သက်ပြင်းတစ်ချက်ချရင်း မောင်က ဆိုလာတယ်။ မောင့်ကြောင့် ကျွန်မရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး မနက်စာစားပွဲခုံမှာ ပြန်ထိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ မနက်က မောင့်မေမေပြုတ်ထားတဲ့ဆံပြုတ်ကို ကျွန်မသောက်နေတုန်း ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး..ဗိုက်ထဲက အစာအိမ်ကို တစ်ခုခုနဲ့ ဖိထားသလို ခံစားရတယ်။ အစာတွေ ပါးစပ်ကထွက်မလာအောင် ဗိုက်ကို ကျွန်မအတင်းဖိထားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မရခဲ့ဘူး။ ပန်းကန်ကို စားပွဲပေါ်လွှတ်ချပြီး သန့်စင်ခန်းဖက်ကျွန်မပြေးပြီး ထိုးအန်မိတယ်။ အန်ပြီး ပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် လေကိုရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်နေချိန်မှာ ငိုသံနဲ့ အပြစ်တင်နေတဲ့ မောင့်မေမေအသံကို ကျွန်မ ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သန့်စင်ခန်းတံခါးဝမှာ ခါးထောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ မောင့်ဒေါသမျက်နှာကို ကျွန်မ မြင်လိုက်တယ်။ ဖြေရှင်းဖို့ ပါးစပ်ဟလိုက်ပေမဲ့ ကျွန်မနှုတ်က စကားတစ်ခွန်းမှထွက်မလာခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ တမင်လုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး မောင်ရယ်…..
မောင်နဲ့ကျွန်မ ပထမဆုံးအကြိမ် အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ကို မောင့်မေမေကစိုက်ကြည့်ပြီး အိမ်ကနေ ထွက်သွားခဲ့တယ်။ မောင်က ကျွန်မကို ခပ်စူးစူးတစ်ချက်ကြည့်ပြီး အမေ့နောက်ကို ဆင်းလိုက်သွားခဲ့တယ်။ မျိုးဆက်သစ်လေး ကျွန်မတို့ဘဝထဲ ရောက်လာခါနီးမှ မထင်မှတ်တဲ့ မတော်တဆမှုက မောင့်မေမေရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကို ခြွေယူသွားခဲ့တယ်။
(၃)ရက်လုံးလုံး မောင်အိမ်ပြန်မလာခဲ့ဘူး။ ဖုန်းလည်း မဆက်ခဲ့ဘူး။ မောင့်မေမေ ရောက်လာပြီးနောက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်ဟာ အရာရာ ဆိတ်သုဉ်းသွားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မဘာများ ထပ်လုပ် ပေးရဦးမလဲ…? ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ကျွန်မလဲ တစ်ချိန်လုံး အန်ချင်နေမိတယ်။ ဘာပဲစားစား အရသာမဲ့နေတယ်။ ဒီပြဿနာတွေနဲ့ ကျွန်မလဲ လူပမ်းစိတ်နွမ်းလှပါပြီ။
လူဖော်ကိုင်ဖက် တချို့က “လူဒီ….နင်မျက်နှာကြည့်ရတာ တော်တော်မလန်းဘူး….. ဆေးရုံသွားပြီး စစ်ဆေးသင့်ပြီ”လို့ အသိပေးလာမှ ကျွန်မဆေးရုံဖက် ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီတဲ့။ အဲဒီမနက် ထမင်းဝိုင်းမှာ ကျွန်မအန်မိတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကျွန်မ သိလာရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ပျော်ရွှင်မှုထဲမှာ ၀မ်းနည်းတာတွေ ရောပါနေတယ်။ မောင်ရော……အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မောင့်မေမေရော…ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုအန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း ကို နည်းနည်းမှ မရိပ်စားမိခဲ့တာလဲ….?
ဆေးရုံဝမှာ မောင့်ကို ကျွန်မတွေ့လိုက်မိတယ်။ (၃)ရက်ပဲ မတွေ့တဲ့ မောင်ဟာ ရုပ်တော်တော်ကျသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မ မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ပြီး လှည့်ထွက်သွားမလို့ပါပဲ ဒါပေမယ့် မောင်ပုံကိုကြည့်ပြီး သနားစိတ်ကို မအောင့်နိုင်ဘဲ မောင်ကိုခေါ်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်မခေါ်သံကြောင့် မောင်လှည့်ကြည့်လာပေမယ့် ကျွန်မကိုကြည့်တဲ့ အကြည့်က သူစိမ်းတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ မျက်လုံးထဲမှာတော့ မုန်းတီးခြင်းအငွေ့တွေက ကျွန်မကို ပြာစေကျခဲ့တယ်။ မောင့်ကို မကြည့်မိအောင် ကျွန်မထိန်းရင်း အငှားကားတစ်စီးကို လက်ပြတားလိုက်တယ်။ ကားပေါ်အတက် မောင့်ကို “ မောင်…မောင်အတွက် သားလေးတစ်ယောက် ကျွန်မမွေးပေးတော့မယ်” လို့ ကျွန်မအော်ပြီးပြောပြချင်လိုက်တာ။ မောင်ကြားရင် ကျွန်မကို ကိုင်မြှောက်ပြီး တစ်ပတ်ရမ်းလိုက်ဦးမလား….? ကျွန်မမျှော်လင့် တာတွေ ဖြစ်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ ကားထဲမှာ ထိုင်ပြီး ကျွန်မငိုမိတယ်။ ဘာကြောင့် ရန်ပွဲလေးတစ်ပွဲက အချစ်ကို ဒီလောက်အထိ ဆိုးဝါးစေခဲ့သလဲ….?
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ရာပေါ်လဲရင်း မောင်မျက်လုံးထဲက အမုန်းတွေကို ကျွန်မပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ စောင်ကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ပြီး ကျွန်မငိုမိပြန်တယ်။ အဲဒီညက အံဆွဲဖွင့်သံတွေကို ကျွန်မကြားလိုက်မိတယ်။ မီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်အရွဲသားနဲ့ မောင့်ကို ကျွန်မတွေ့လိုက်မိတယ်။ ကျွန်မကို အေးစက်စက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ပိုက်ဆံတွေကို မောင်ယူနေတယ်။ ကျွန်မကို မမြင်သလိုဘဲ ဘဏ်စာအုပ်ကိုယူပြီး သူပြန် ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်မကို တစ်ကယ်ပဲ ခွဲသွားတော့မှာလား…? မောင်က တော်တော်လျင်တာပဲ… အချစ်နဲ့ငွေကို သပ်သပ်စီခွဲတော့မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ အေးစက်စက်ရယ်လိုက်မိတယ်။ မျက်ရည်တွေကတော့ ပါးပြင်ပေါ် တောက်လျောက်စီးကျလို့လာတယ်။
နောက်တစ်ရက်မှာ ကျွန်မ အလုပ်မသွားခဲ့ဘူး။ စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး မောင်နဲ့ ကျွန်မဆွေးနွေးချင်သေးတယ်။ မောင့်ကုမ္ပဏီမှာ မောင့်ကို သွားရှာတော့ အတွင်းရေးမှူးမလေးက “ သူ့အမေ ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးလို့ ဆေးရုံသွားလိုက်တယ်”။ အဲဒီစကားကြားတော့ ကျွန်မဆွံအသွားခဲ့ရတယ်။ ဆေးရုံကို ကျွန်မအပြေး လိုက်သွားခဲ့တယ်။ မောင်ကတော့ အေးစက်မာကျောတဲ့မျက်နှာနဲ့ ကျွန်မကို လှည့်တောင်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ မောင့်မေမေရဲ့ ဖြူရော်နေတဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားရေ…..ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ…?
မောင့်မေမေ သင်္ဂြိုလ်ပြီးတဲ့အထိ ကျွန်မကို မောင်စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ဘူး။ ကျွန်မကိုကြည့်တဲ့ အကြည့်တိုင်းမှာ မုန်းတီးမှုအပြည့်တွေနဲ့ပါ။ မောင့်မေမေ ကားတိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မသိရတာက အဲဒီနေ့ မောင့်မေမေ အိမ်ကထွက်ပြီး ရွာကိုပြန်မလို့ ကားဂိတ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ မောင်လည်း အမေနောက် အပြေးလိုက်ခဲ့ပေမယ့် မျဉ်းကျားကူးချိန်မှာ တစ်ဖက်ကလာတဲ့ ကားနဲ့ တိုက်မိသွားခဲ့ကြောင်း တစ်ခြားလူတွေ ကတစ်ဆင့် ကျွန်မသိလိုက်ရတယ်။ မောင့်ရဲ့မုန်းတီးမှုတွေကို ကျွန်မ သဘောပေါက်သလိုရှိလာတယ်။ အဲဒီနေ့ကသာ ကျွန်မ မအန်ခဲ့ရင်၊ အဲဒီနေ့ကသာ ကျွန်မတို့ရန်မဖြစ်ခဲ့ရင်… အခုတော့ မောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်မဟာ မောင့်မေမေကိုသတ်တဲ့ တရားခံဖြစ်နေခဲ့ပြီလား….?
အိမ်ကို ပြန်လာပြီးတဲ့နောက် မောင့်မေမေအခန်းမှာပဲ မောင်နေခဲ့တယ်။ ညအိမ်ပြန်တိုင်း မောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာ အရက်နံ့တွေမွန်းလို့နေတယ်။ အားနာခြင်းနဲ့သနားခြင်းတွေက ကျွန်မရင်ဝကို မွန်းကြပ်နေအောင် ဖိထား ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အတွက် မျိုးဆက်သစ်လေး ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း မောင့်ကို ကျွန်မ ပြောပြချင် လိုက်တာ….ရှင်းပြချင်လိုက်တာ… ဒါပေမယ့် အေးစက်တဲ့ မောင်မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပြီး အဲဒီစကားတွေကို ကျွန်မပြန်မျိုချခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မကို နာနာလေး တစ်ခါလောက်ရိုက်လိုက်…ရက်ရက်စက်စက် တစ်ခါလောက် ဆဲလိုက် ကျွန်မခံနိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာ ကျွန်မ တမင်လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူး မောင်ရယ်….
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် အပ်ကြောင်းထပ်ခဲ့တယ်။ မောင်အိမ်ပြန်ချိန်က ညပိုနက်လို့လာခဲ့တယ်။ တစ်ခါက စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှေ့ကျွန်မဖြတ်တော့ ကြည်လင်တဲ့ ပြတင်းမှန်ထဲမှာ မောင်နဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်မိတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ဆံပင်ကို မောင်က ပွတ်သပ်လို့…ကျွန်မ သဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။ ဆိုင်ထဲကို ကရူးကမူးပြေးဝင်ပြီး စားပွဲရှေ့မှာ ကျွန်မရပ်လိုက်တယ်။ မောင့်ကို ခပ်စူးစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ကျွန်မမျက်အိမ်မှာ မျက်ရည်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ ရပ်နေလိုက်မိတယ်။
ကျွန်မကိုကြည့်လိုက် မောင့်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ ထရပ်ပြီး ထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို မောင်က လက်လှမ်း ဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အေးစက်ခက်ထန်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကျွန်မကိုကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မနှလုံးခုန်သံကို ကျွန်မ ပြန်ကြားနေမိတယ်။ သေမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းဝမှာရပ်ပြီး ခုန်နေသလိုမျိုး… ကျွန်မဟာ ရှုံးသူပါ။ ဆက်ရပ်နေရင် ကျွန်မရော ဗိုက်ထဲက ကလေးပါ အဲဒီနေရာမှာတင် လဲကျသွားနိုင်တယ်။
အဲဒီညက မောင်ပြန်မလာခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့ သူနဲ့ကျွန်မကြားက သံယောဇဉ်ကို သဘောပေါက်စေပုံရတယ်။ ယောက္ခမရဲ့သေဆုံးမှုနောက်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အချစ်လည်း လိုက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီ။ မောင်လုံးဝ ပြန်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မအလုပ်ဆင်းပြန်လာရင် အိမ်ကဘီရိုတွေ မွေနောက်ထားသလိုပဲ…ကျွန်မ မရှိတုန်း မောင်သူ့ပစ္စည်းတွေ ပြန်လာယူတယ်ထင်ပါတယ်။ မောင့်ကို ကျွန်မ ဖုန်းလည်းမဆက်ခဲ့ဘူး။ အစက မောင့်ကို ကျွန်မရှင်းပြဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စိတ်တွေ လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ။
ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ဆေးရုံသွားပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခြား ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းတွေကို လင်ယောက်ျားနဲ့အတူ ဆေးရုံလာတာမြင်ရင် ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားတွေ မွကြေသွားသလို ခံစားရတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ အကြံပေးတယ်။ ကျွန်မ မလုပ်ရက်ဘူး… ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မမွေးကိုမွေးမယ်။ မောင့်မေမေအတွက် အလျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
တစ်ရက် ကျွန်မအလုပ်ဆင်းပြန်တော့ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ မောင့်ကိုတွေ့လိုက်မိတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံးလည်း ဆေးလိပ်မီးခိုတွေနဲ့ မွန်းကြပ်လို့….စားပွဲခုန်ပေါ်မှာ စာရွက်တစ်ရွက် တင်ထားတယ်။ အဲဒီစာရွက်ကို ကျွန်မ မကြည့်လဲ ဘာအတွက်ကြောင့် ဆိုတာကို ကျွန်မ သိလိုက်ပါတယ်။
မောင်မရှိတဲ့ နှစ်လအတွင်း စိတ်၏ တည်ငြိမ်ခြင်းကို ကျွန်မကျင့်သားရခဲ့တယ်။ “ခဏလေး…ကျွန်မလက်မှတ် ထိုးပေးမယ်” ဦးထုပ်ကိုချွတ်ရင်း မောင့်ကိုကျွန်မကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မလိုပဲ မောင့်မျက်လုံးထဲမှာလည်း တွေဝေခြင်းတွေ ပြည့်နှက်လို့နေတယ်။ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်ရင်း မငိုမိဖို့ ကျွန်မအားတင်းလိုက်တယ်။ အင်္ကျီကိုချိတ်ပြီး မောင်ဖက်လှည့်လိုက်တော့ မောင်က ပြည့်ဖောင်းလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ဗိုက်ကို မျက်တောင်မခတ် စိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်မပြုံးပြုံးလေးနဲ့ စာရွက်ပေါ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး မောင့်ဆီ စာရွက်ကို တွန်းပို့လိုက်တယ်။
“လူဒီ….မင်း ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ?”
အမေသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်မကို မောင်စကားပြောခြင်းပါ။ ကျွန်မမျက်လုံးကို ကျွန်မ မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပါးပြင်ပေါ်ကို မျက်ရည်တွေ တရဟောစီးကျလာခဲ့တယ်။
“ဟုတ်တယ်…ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိဘူး….ရှင် သွားလို့ရပြီ”
မောင် ထွက်မသွားခဲ့ဘူး။ အမှောင်ထဲမှာ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိုက်ကြည့်လို့….မျက်ရည်တွေ မောင်ပါးပြင်ထက် စီးကျလို့ လာခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးဟာ အဝေးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ…ဝေးလွန်းလို့ ကျွန်မအပြေးလိုက်ခဲ့လည်း ဖမ်းဆုပ်လို့ မရခဲ့တော့ပါဘူး။
“မောင်မှားသွားတယ်”လို့ တောင်းပန်စကားက ဘယ်နှကြိမ်မြှောက်မှန်းမသိ မောင်ဆီက ကျွန်မကြားခဲ့ရတယ်။ အစတော့ ကျွန်မဟာ ခွင့်လွှတ် နားလည်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ခဲ့ မိတာ…အခုတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါလား။ စားသောက်ဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အေးစက်မာကျောတဲ့ မောင့်အကြည့်တွေဒီတစ်သက် ကျွန်မ ဘယ်လို မေ့လို့ရနိုင်မလဲ….?
ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ကျွန်မရဲ့သေးငယ်တဲ့ မတော်တဆ အပြုအမူတစ်ခုကို မောင်က တမင်သက်သက် ကြီးထွာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ အေးစက်တဲ့ဒီအကြည့်တွေ အရည်ပျော်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ နှလုံးသားကိုယ်စီမှာ ဒဏ်ရာတွေက အထပ်ထပ် ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီလေ။
ဗိုက်ထဲက ကလေးကို စဉ်းစားမိတိုင်း ရင်ကို နွေးထွေးစေခဲ့ပေမယ့် မောင့်ကို ကျွန်မအေးတိအေးစက်ပဲ ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ မောင်ကျွေးတာတွေ မစားဘူး၊ မောင်ဝယ်တာတွေ မယူဘူး၊ မောင်နဲ့လဲ ကျွန်မစကားတစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ဘူး။ ဟိုစာရွက်ပေါ် ကျွန်မလက်မှတ် ထိုးပြီးကတည်းက လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ ကျွန်မဘဝမှာ လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ အိပ်ခန်းထဲ မောင်ဝင်လာရင် ဧည့်ခန်းဖက်ကို ကျွန်မရှောင်နေလိုက်တယ်။ နောက်တော့ အမေ့ခန်းမှာပဲ မောင်အိပ်တော့တယ်။
ည…မောင့်အခန်းက ညည်းသံတိုးတိုးလေးကို ကျွန်မကြားလိုက်မိတယ်။ ဒါဟာ မောင့်အကျင့်ပေါ့။ အရင်က ကျွန်မစိတ်ကောက်ရင် မောင်က ဖျားချင်ဟန်ဆောင်ပြီး ညည်းပြတတ်တယ်။ မောင်တကယ်ဖျားနေတယ် အထင်နဲ့ စိုးရိမ်တကြီး ပျာရာခတ်နေတတ်တဲ့ကျွန်မကို မောင်က ပွေ့ဖက်ရင်း တဟားဟား အော်ရယ်တတ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက မောင့်ကိုစိုးရိမ်တာဟာ အချစ်စိတ်ကြောင့်ဆိုတာ မောင်မေ့နေခဲ့ပြီလား…? အခုတော့…… ကျွန်မမှာ အဲဒီအချစ်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။
မောင့်ညည်းသံက ကျွန်မ မွေးဖွားရက်အထိ ရက်ရှည်ခဲ့တယ်။ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ မောင်နေ့တိုင်း ၀ယ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ကလေးစာအုပ်တွေ၊ စားစရာတွေ တစ်ထုပ်ပြီး တစ်ထုပ် အိမ်ထဲမှာ တောင်ပုံရာပုံပါပဲ။ မမြင်ရသေးတဲ့ ရင်သွေးအတွက် အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ ကျွန်မစိတ်ပြန်လည်လာအောင် မောင်ကိုင်လှုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေ မာကျောသွားပြီ မောင်။ မောင်ကို စကားလည်းမပြော၊ ဂရုလည်းမစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် မောင်ဟာ သူ့အခန်းထဲမှာပဲ ပိတ်လှောင်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ စာတွေ တစ်ချောက်ချောက်ရိုက်နေခဲ့တယ်။
မောင်ဘာလုပ်နေမလဲ…? ကျွန်မ နည်းနည်းမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့တော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ လတွေကြာခဲ့တယ်။ ညတစ်ညမှာ ဗိုက်ထဲထိုးပြီး နာလာလို့ ကျွန်မအော်လိုက်တဲ့ အသံကိုကြားတော့ မောင်ဟာ မြားတစ်စီးရဲ့အလျှင်လိုပဲ ကျွန်မအခန်းထဲ ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနေ့မျိုးကိုပဲ မောင်စောင့်နေ ခဲ့တယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မကို ထမ်းပိုးပြီး အိမ်ထဲကနေ မောင်အပြေးထွက်ခဲ့တယ်။ ကားတစ်စီးငှားပြီး တစ်လမ်းလုံး ကျွန်မရဲ့လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လို့ နှာဖူးပေါ်ကျလာတဲ့ ချွေးတွေကို မောင်သုတ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ သားဖွားမီးယပ်ဆောင်ဖက် ကျွန်မကိုထမ်းပိုးပြီး မောင်အပြေးသွားနေခဲ့တယ်။ မောင်ရဲ့ပိန်လှီတဲ့ နောက်ကျောကိုမှီရင်း ကျွန်မခေါင်းထဲ အတွေးတချို့ဝင်လာခဲ့တယ်။ မောင့်လောက် ကျွန်မအပေါ် ဘယ်သူက ချစ်နိုင်ဦးမလဲ…. ? မီးဖွားခန်းထဲ တွန်းဝင်သွားတဲ့ ကျွန်မကို တံခါးဝမှာရပ်ပြီး မောင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ နာတာကို အောင့်အီးပြီး မောင့်ကို ကျွန်မ ပြုံးပြလိုက်မိတယ်။
ကျွန်မနဲ့သားလေးကို ကြည့်ပြီး မောင်မှာ ကြည်နူးမဆုံး တပြုံးပြုံးဖြစ်နေတော့တယ်။ မောင့်လက်ကို ကျွန်မ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ကျွန်မကို မောင်တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး ရုတ်တစ်ရက် မောင်ပျော့ချွေလဲကျသွားတော့တယ်။
မောင်….နွမ်းနယ်တဲ့ မောင့်မျက်လုံးတွေကို ပြန်ဖွင့်မလာသေးဘူး။ မောင့်အတွက် မျက်ရည်တွေကုန်ခဲ့ပြီလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံး ဆွဲဆုတ်ထားသလို နာကျင်နေခဲ့တယ်။ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်က မောင်ရဲ့အသဲကင်ဆာဟာ နှောင်းပိုင်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မောင်အခုထိ တောင့်ခံနိုင်ခဲ့တာ ထူးဆန်းမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လကတည်းက မောင်မှာ အသဲကင်ဆာရှိကြောင်း သိခဲ့ရတယ်တဲ့…. အားလုံးကို ပြင်ဆင်ထားတော့လို့ ဆရာဝန်က ကျွန်မကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။
နပ်စ်တားတာကို ကျွန်မဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ဆေးရုံကဆင်းပြီး အိမ်ကို ကျွန်မပြန်ခဲ့တယ်။ မောင့်အခန်းထဲဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာကို ကျွန်မဖွင့်လိုက်တယ်။ မောင့်ရောဂါကို စသိတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လကတဲ့.. မောင်ညည်းသံတွေက တကယ်ပေါ့။ ကွန်ပျူတာထဲမှာ သားအတွက် မောင်ရေးထားခဲ့တဲ့ စာတွေ…..
သား…သားကြောင့် ဖေဖေအခုချိန်ထိ တောင့်ခံခဲ့တယ်။ သားမျက်နှာကို မြင်ပြီးမှ ဖေဖေလဲကျသွားပါစေ ဖေဖေကျေနပ်တယ်။ သားဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်တာတွေ၊ စိတ်ညစ်တာတွေ ကြုံရဦးမယ်ဆိုတာ ဖေဖေသိတယ်။ သားရဲ့ကြီးပြင်းလာမယ့် လမ်းတစ်လျောက်မှာ ဖေဖေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာ ကောင်းလိမ့်မလဲ.. ဖေဖေမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ မရှိတော့ဘူး သားရယ်။ သားဘ၀မှာ ကြုံတွေ့တတ်ရမယ့် မေးခွန်းတွေအတွက် ဖေဖေစာတွေရေးခဲ့တယ်။ ဖေဖေအကြံပြုချက်ကို သားမှီငြမ်းနိုင်ပါစေ။ ဖေဖေရဲ့ ဒီစာတွေနဲ့ သားကြီးပြင်းလာမယ့် လမ်းတစ်လျောက်မှာ အဖော်လုပ်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ဖေဖေယုံကြည်တယ်။ ဖေဖေ အရမ်းပျော်တယ်သား။ သားမေမေ့ကိုလည်း သိပ်ချစ်တယ်။ သူအရမ်းပင်ပန်းနေပြီ။ သူဟာ သားကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်၊ ဖေဖေသိပ်ချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့ကွယ်။
သားမူကြိုကျောင်း တက်တာကအစ ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ဝင်တဲ့အထိ နောက် ချစ်သူရည်းစား ထားတဲ့အထိ သားအတွက် မမြင်ရသေးတဲ့ အနာဂတ်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တသီတကုံး မောင်ရေးထားခဲ့တယ်။
လူဒီ…ဒီတစ်သက် မောင့်အတွက် အပျော်ရွှင်ဆုံးဟာ လူဒီကို လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ လူဒီကို ဒဏ်ရာတွေရစေခဲ့တဲ့ မောင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ရောဂါကိုကွယ်ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ သားလေးမမွေးခင် လူဒီကို စိတ်မထိခိုက်စေချင်လို့ပါ။ ဒီစာကို ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင် မောင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီပေါ့နော်… မောင့်ကို ချစ်နေသေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ လူဒီ…. ဒီလက်ဆောင်တွေက မောင်ကိုယ်တိုင် သားလေးကို မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ လူဒီကပဲ နှစ်တိုင်း မောင့်ကိုယ်စား သားကို ပေးပေးပါနော်။ ဘူးပေါ်မှာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ နှစ်ရက်လတွေကို ရေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့…လူဒီ။
မောင်က မေ့မျော့နေဆဲပါ။ သားကို ကျွန်မပွေ့ပြီး မောင့်ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ “ မောင်… မျက်လုံး လေးဖွင့်ပြီး တစ်ချက်လောက် ပြုံးလိုက်ပါလား မောင်… မောင်ရင်ငွေ့ကို သားတစ်သက် မှတ်မိသွားစေချင်လို့ပါ” ကျွန်မအသံကြောင့်ထင်တယ် မျက်လုံးကို မောင်အားယူ ဖွင့်လိုက်တယ်… ယဲ့ယဲ့လေးပြုံးလို့ … သားကမောင့်ရင်ခွင်မှာ လက်ကလေးကို ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့… ကျွန်မ ကင်မရာရှပ်တာကို အမြန်ဆုံး နှိပ်ချလိုက်တယ်။ မျက်ရည်တွေက ကျွန်မပါးပြင်ပေါ်ကို အတားအဆီးမဲ့ စီးကျလို့ လာခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ(Jan. 18. 2015)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/17/2015 05:45:00 AM